Multnomah County Helps Voters - Somali | Multnomah County
Isniinta, Oktoobar 1, 2018
Cod-bixiyayaasha naafada ah waxay caawimaad codaynta ah ka codsan karaan saaxiib, xubin qoyska ka mid ah, ama qof kale oo ay yaqaanaan. Haddii loo baahdo, cod-bixiyayaasha waxay sidoo kale wici karaan ama ka codsan karaan caawin codaynta iyo doorashooyinka la xidhiidha Doorashooyinka Degmada Multnomah. Kooxaha Caawinta Cod-bixiyaha Doorashooyinka ayaa ku caawin kara cod-bixiyaha gurigiisa, xarunta uu ku nool yahay, ama goobaha adeegyada doorashooyinka ee SE Portland ama Gresham. Kaalmadaan marwalba waa lacag la'aan. Sharci ahaan, loo-shaqeeyayaasha ama wakiilada ururrada shaqaalaha ma bixin karaan caawin.
Cod-bixiyayaasha af Ingiriisigoodu liito waxay sidoo kale codsan karaan caawimaad. Doorashada Degmada Multnomah waxay jooga shaqaale luuqaado badan ku hadla. Waaxda Doorashooyinka waxay sidoo kale bixinta kartaa turjubaan, oo lacag la'aan ah qof walba oo u baahan caawimo ah cod-bixinta ama nidaamyada doorashooyinka ee ah luqad kale oo aan ahayn Ingiriisi. Turjumaad taleefanka ah ayaa sidoo kale luuqado badan lagu heli karaa.
Doorashooyinka deegaanka Multnomah waxey cod bixiyayaashu xusuusinayaan in Oktoobar 16 ay tahay maalinta kamadambeysta ee isdiiwaan gelinta kaqeyb qaadashada Doorashooyinka Guud ah ee Noofeembar 6. Dhammaan cod-bixiyayaasha mutaystay ee Degmada Multnomah waxay heli doonaan warqad cod-bixin toddobaadka sadexaad ee Oktoobar. Cod-bixiyayaasha Oregon waxay iska diiwaangalin karaan onlayn www.oregonvotes.gov/register ama waxey buuxin karaan warqadda Kaarka Isdiiwaangalinta Cod-bixiyayaasha ee Oregon oo laga heli karo xafiiska doorashooyinka, maktabadda dadweynaha, Oregon DMV, ama xafiiska boostada. Cod-bixiyayaasha safarka ku maqan maalinta doorashada waa in ay ula soo xidhiidhaan xafiiska doorashooyinka sida ugu dhakhsaha badan si ay u dalbadaan warqadda cod-bixinta maqnaanshaha.
Doorashooyinka Degmada Multnomah waxa laga furayaa Goobta Cod Bixinta ee Gresham doorashadan. Goobta Cod Bixinta Degdega ah waxay ka furnaan doontaa Oktoobar 22 - Noofambar 6 oo ku taal gudaha Dhismaha Bariga Degmada Multnomah. Cod-bixiyayaashu waxay awoodi doonaan inay baddalaan warqadaha cod-bixinta lumay, helaan kaalmo codaynta ah, su’aalo waydiiyaan, ama waxay iyaga oo socda iman karaan si ay u codeeyaan Goobta Cod Bixinta ee ku taala suuqa hoose ee Gresham.
Doorashooyinka Degmada Multnomah waxay doonaysaa in dhammaan cod-bixiyayaasha ay awoodaan in ay u codeeyaan si fudud, gaar ah oo madaxbannaan, fahmaan tallaabooyinka cod-bixinta, fahmaan xeerarka doorashooyinka, ayna ogaadaan cidda ay caawimaad weydiisanayaan. Xaaladda cod-bixiye walba waxay noqon kartaa mid gooni ah.